Khadra Yuuruf oo ah gabar soomaali ah oo ka howl geli doonta Telefeeyshinka NRK | Somaliska
Taleefeyshinka dalkaasi Noorweey ee NRK, ayaa markii ugu horeeysay waxaa ka howl geli doonta gabar soomaali ah oo lugu magacaabo Khadra Yuusuf. Gabadhan oo telefeeyshinkaas kula shaqeyn doonta qaab cilmi baaris ah, ayaa waxaa ay horey ula soo shaqeeysay warbaahinno kala duwan islamarkaasina qaarkood ay wax ku qori jirtay.
Shabakadda Medier24 ee dalkaasi islamarkaasina arrimaha warbaahinta ka hadasha ayaa sheegtay in Khadra ay ka guuleey 124 oo shaqadan codsaday. Inkastoo gabadhani barnaamijyo eeysan soomaalida Noorweey jecleeysan ka diyaarisay, haddana waxaa markii ugu horeeysay ay ka soo dhex muuqatay muuqa baahiya dalkaasi sanadkii 202-dii, markaas oo ay kaamiro qarsoon la dhex gashay masaajidada Noorweey oo ay barnaamijyo ka diyaarisay.
Ugu dambeyntiina gabadhan ayaa mar ay u hadleeysay shabakadaasi waxaa ay sheegtay ineey ku faraxsan tahay shaqada cusub ee ay nasiibka u yeelatay waloow ay tahay kumeel gaar. Balse soomaalida Noorweey qaarkood uma arkaan arrin xiiso leh oo wax ku soo kordhin kara marka laga reebo in uu ay wadato magac soomaali.